दुई हप्तादेखि गुफामा थुनिएका ६ जना बालककाे उद्धार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दुई हप्तादेखि गुफामा थुनिएका ६ जना बालककाे उद्धार
एजेन्सी। थाइल्यान्डको उत्तरी इलाकामा करिब दुई सातादेखि थुनिएर रहेका १२ किशोर र एक प्रशिक्षकमध्ये ६ जना बालकलाई आइतबार उद्धार गरिएको छ । लामो समयसम्म गुफामा फसेका किशोरहरूलाई नजिकैको शिविरमा लगिएको छ ।
किशोरहरूको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गरिएको उद्धारमा संलग्न समूहका एक सदस्यले जानकारी दिए । थाइ सरकारले दिएको जानकारीमा ६ बालकको सकुशल उद्धार गरिएको छ । थाइल्यान्डको एउटा गुफामा थुनिएका १२ जना बालक र उनीहरूका प्रशिक्षकसहित १३ जनाको उद्धारकार्य आइतबार बिहानैबाट सुरु भएको थियो । स्थानीय समयअनुसार बिहान १० बजे उद्धार कार्य सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरू सबैलाई उपचारका लागि अस्पतालमा राखिएको छ ।